चुल्होले आगो बिर्सिएको बेला
कोरोनाले संसार थल्लिएको बेला
मानव सभ्यता बेस्सरी तर्सिएको बेला
मेरो देश अघि, धेरै अघि बढेको बेला
खै के ? तयार गरिरहेछन्, बाँडिरहेछन
सङ्कटकालीन राहातका अध्यादेशहरु
निसाना छुटाइ रहेछन्
कोठामा मजदुर थुनिएकै बेला
चुल्होले आगो बिर्सीएकै बेला
देश आधुनिकतामा अघि बढेकै बेला
मे दिवसकै मौका छोपेर
खै के? खुवाइ रहेछन्, खाइरहेछन्
दाउराको आगोमा पकाउदै,पकाउदै
बिहान नन भेज, बेलुका भेज
केहि थान कविताहरु पस्किरहेछन्।
बाँझा नहुने खेतहरु
भोका नबस्ने पेटहरु।
बच्चाहरु घरमा बन्दी भएकै बेला
बमका छर्राले रोल्पामा रगत बगेकै बेला
लाखौ युवा परदेशमा बेवारिसे छोडिएकै बेला
मुग्लाने लाइ घर आउन रोकेर
खै के ? बहादुरी गरिरहेछन्
रगतको आहालम निब डोबेर
केहि थान सपनाहरु कोरिरहेछन्
सार्वभौम जनताका हिस्साहरु
नबग्ने रगतका किस्साहरु
नखस्ने आँसुका ढिक्काहरु।